Clinic/Medical Center Archives - Shwe Myanmar Rooms, Singapore Rooms for Shwe Myanmar
Home » Clinic/Medical Center
Dr Than Zaw Oo (Myanmar Dental Specialist in Periodontics Q&M Dental Surgery)
Ph : 6251 3233
Dr. Than Zaw Oo BDS(Singapore) MDS (Periodonology)(Singapore) M Perio RCS (Edinburgh, U.K) F.A.M (Periodontics) Singapore Dental Specialist in Periodontics Q&M
Thwin’s Liver & Gastro Clinic
Ph : 6264 8752
ကုသပေးလျှက်ရှိသောရောဂါများ အထွေထွေ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်း အစာအိမ်နှင့် အူမကြီးမှန်ပြောင်းဖြင့် ရောဂါရှာခြင်း ကုသခြင်း အသည်းရောင် ဘီပိုး စီပိုး အသည်းကင်ဆာ အသည်းကြွပ်ခြင်း အသည်းအဆီဖုံးခြင်း အသည်းအစားထိုးရန် သင်မသင့်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် အစားထိုးပြီးနောက်ပိုင်း ကုသစောင့်ရှောက်ခြင်း သည်းခြေအိတ် ကျောက်တည်ခြင်း အစာမကြေ လေပွလေအောင့်ခြင်း လေချဉ်တက်ခြင်း အူလမ်းကြောင်း လှုပ်ရှားမှု မမှန်ကန်ခြင်း ရောဂါများကို စင်ကာပူဆေးကောင်စီမှ အသိအမှတ်ပြု အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းနှင့် အသည်းရောဂါ အထူးကု မြန်မာဆရာဝန်ကြီးကိုယ်တိုင်ကုသပေးနေပါသည်။ မြန်မာဘာသာဖြင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။
Dr Tun Yee ( The Eye Centre) Consultant Eye Suregeon
Ph : 6457 3866/6457 4188
Dr Tun Yee MBBS, DO (Germany) Consultant Eye Suregeon Main Office:3MT. ELLZABETH SUITE, #11-17/18 MT. ELLZABETH MEDICAL CENTRE SINGAPORE 228510. Tel: 6734 4778/6734 4887 Fax: 6734 3135 BRANCH BLK 452, #01-1785, ANG MO KIO AVE 10, SINGAPORE 560452. TEL: 6457 3866/6457 4188 FAX: 6552 5767
Aye Metta Clinic
Ph : 63370504
Consultation Hours Mon to Fri & Sun : 14:30 Hr to 19:00 Hr Close on Sat & PH
Kembangan Medical Centre
Ph : 63335144
Consultation Hours: Mon to Sat : 14:30 Hr to 18:30 Hr Close on Sun & PH
BLESS MEDICAL CNTRE
Ph : 6266 4119
Dr Thant Zin MBBS, FRCS(Edin) M Med Surgery Consultation Hours Mon-Sat: 8 Am to 1 PM,2PM to5PM, 6.30PM to 9.30 PM
Ph : 9099 1664, 9437 931
Dr. Shwe Tin MBBS, FAMS, FACC, FRCP(Ed), FRCP(Glasg) Senior Consultant Cardiologist & Physician Office Hour: Mon, Wed, THU, Fri : 14:30 Hr to 19:00 Hr Sat: 16:00 Hr to 19:00 Hr Sun: 13:00 Hr to 18:30 Hr